ဒဂုံဆောင်ဖဲဝိုင်း - ၂
တံခါးကို တစ်ဒုံးဒုံးထုသောအသံကြောင့် မှေးကနဲ အိပ်ပျော်တော့မည့်ဆဲဆဲမှာ လန့်နိုးသွားရပါသည်။ ညက သီရိဆောင်မှာ ဂစ်တာ သွားတီးကြတာ အဆောင်ပြန်ရောက်တော့3နာရီထိုးနေပြီ……. မနက်ကလည်း တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်နှင့် အိပ်လို့မရခဲ့ပါ။ ယခုလည်းအိပ်မယ်ကြံကာရှိသေး…တံခါးလာထုနေပြန်ပြီ……..
ဟင်း….အိပ်ချင်လွန်းလို့…တံခါးဝမှာ ” အိပ်နေသည်မနှေင့်ယှက်ပါနဲ့ “ လို့ စာကပ်ထားလည်းမရပါ…
ကိုကိုဂျစ်….ဖက်တီးကို လမ်းဘေးမှာဘဲ ထမင်းစားခိုင်းတော့မလို့လား….
လုပ်ပြီ…ဒီဖက်တီး လူကိုသနားအောင်လည်း ပြောတတ်သည်။ ဖက်တီးကမြို့ထဲမှာနေသည်။ ခန္ဓာ ကိုယ်က ကျနော့်ထက် လေးဆလောက် ၀သည်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်က ဆင်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်မခြား…..
အစားကိုလည်း တစွတ်စွတ်စားတော့ ဒီလောက်ဝတာပေါ့….. ဒီအတိုင်းဆက်အိပ်နေလို့လည်းမရ တော့ပါ…. ဖက်တီးက အလိုက်ကမ်းဆိုး မသိတဲ့ကောင်…..
မောင်ဂျစ်… မင်းနေမကောင်းဘူးလား… နေ့ခင်းကြီးအိပ်နေလိုက်တာ…..
မင်းအတွက် တရုတ်တန်းက ကော်ပြန့်စ်ိမ်းတွေ ၀ယ်လာခဲ့တယ်..စားလိုက်ပါအုံး…….
မောင်ဂျစ်တော့လုပ်ပြီ.. ငါစေတနာနှင့်စားစေချင်လို့ ယူခဲ့တာ……..
ဖက်တီးက စားပွဲပေါ်မှာ ထမင်းဗူးကို ဖွင့်ပြီး စားနေပါသည်။
သူက 12:30 နာရီ အတန်းလွှတ်ချိန်မှာ ဒဂုံဆောင်ကျနော့်အခန်းကိုလာပြီး ထမင်းစားလေ့ရှိပါသည်။
ကျနော်မရှိရင်တော့ တောင်ငူကင်တင်းမှာ သွားစားလေ့ရှိပါသည်။
ကျနော်မပြောလည်း…. သူ့ကော်ပြန့်စိမ်းသူဘဲစားမည်… သူ့ဗိုက်အိုးက ဘယ်တော့မှမပြည့်…….
ဖက်တီး စားသောက်ပြီးသွားပါပြီ…… သူ ငသေးကုတင်ပေါ်တက်ပြီး တစ်ရေးတစ်မောအိပ်တော့မည်။ ခဏအတွင်းမှာ သူ့ရဲ့ဟောက်သံကြီးက တစ်ခန်းလုံးကို ဖုံးသွားပါတော့သည်။
ကျနော် နားနှစ်ဘက်ပိတ်ပြီး ဆက်အိပ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်မရပါ…
ဖက်တီး အသံနှင့် နှိပ်စက်နေပြီ….
ညကသီရိဆောင်မှာ ဂစ်တာတီးပြီး အဆောင်သူတွေကိုအိပ်မရအောင် နှိပ်စက်ခဲ့သောကျနော်… ၀ဋ်လည်ပြီ…….
ထို့ကြောင့် သူ့မိဘက စီးပွားရေးအဆင်ပြေသည်။ ဒိပြင် ဖက်တီးက တစ်ဦးတည်းသောသား…. သူ့အိမ်မှာသူ..ခလေး…
ကွင်းဆင်းတော့လည်း အတူတူဆိုတော့လည်း တော်တော်ခင်ခဲ့ကြသည်။ ကွင်းဆင်းစဉ်က လူတကာနောက်ပြောင်စရာဖြစ်နေသော သူ့ကို ကျနော် ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သောကြောင့် သူ့မိဘတွေပါ ကျနော်ကို ကျေးဇူးတင်ခဲ့ကြပါသည်။
စီးပွားရေးနှင့်လုံးထွေးနေသော သူ့မိဘက ကျနော်ကို အပ်နှံခဲ့ပါသည်။ ဖက်တီး မျက်လုံးက တော်တော်မှုံပါသည်။ သူ့မျက်မှန်ဟာ ပုလင်းကွဲဖင်ပိတ်လောက် ထူပါသည်။ အတန်းထဲမှာ သူ့လို ပုလင်းကွဲဖင်တပ်ထားသော သူငယ်ချင်းတစ်ယေက်ရှိပါသေးသည်။ ပုသိမ်ကမွန်ကြီး…..
ကိုဂျစ်ရေ….ကွင်းဆင်းတုန်းက မျောက်ခေါင်းတို့အဖွဲ့က ငါ့ကို ရန်ကုန်သားဖြစ်ပြီး ဖဲမရိုက်တတ်လို့ ၀ိုင်းဟားနေကြတယ်…
ဟေ့..ဟေ့..မလုပ်ပါနဲ့..ကိုဂျစ်တို့လို ကလိမ်ကကျစ်ကစားနည်းတော့ မသင်ပါရစေနဲ့…..
မောင်ဂျစ်အောက်ဖဲ ချီးပုံးနှင့်ဇံကြီးဆီက ပိုက်ဆံတွေ ညာညာပြီး စားသွားတာ…. ဖက်တီးမသိဘူး…မထင်နဲ့…..
ကိုဂျစ်အောက်ဖဲ…ချီးပုံးကို ဇံကြီး တစ်ထင်ပြီး ကျွေးတော့လည်းစားတာပေါ့…
ဖက်တီးကို ရှုပ်တဲ့ဖဲရိုက်နည်းမသင်ပေးနှင့်… လွယ်လွယ်နဲ့ ကံချင်းယှဉ်ပြီးကစားတဲ့နည်းသင်ပေးပါ...
သူ့ကို ကျနော် ဖဲသုံးချပ်စီဝေပြီး ကိုးမီးကစားနည်းသင်ပေးလိုက်ပါသည်။
တစ်ခါမှ ဖဲမရိုက်ဖူးသော ဖက်တီး အရမ်းတက်ကြွနေပါသည်။ အရင်တုန်းက အခန်းထဲမှာ ထမင်းစားပြီးရင် သူ တစ်ရေးတမော အိပ်လေ့ရှိပါသည်။ ကိုးမီးရိုက်တတ်ပြီးတော့ သူမအိပ်တော့ပါ။ ကျနော်ကို လူအတင်းစုခိုင်းပါသည်။ သူ့မှာ ဖဲရိုက်ချင်စိတ် တော်တော် ပြင်းပြနေပါသည်။ ဒါပေမယ့် ဖက်တီး တစ်ပွဲကိုတစ်ကျပ်ထက်တော့ပိုမကစား……
တစ်ခါတစ်ရံ လူစု၍မရသောနေ့များတွင် ကျနော် သူ့အဖေါ်အဖြစ် ကစားပေးရပါသည်။ ဖက်တီးကတော့ ဖဲကိုင်ရရင် ပျော်နေတာဘဲ…ကျနော်က အိပ်ချင်စိတ်တစ်ဝက်နဲ့ ကစားပေးနေရသည်။ ဘာပညာမှမပါတဲ့ ကိုးမီးကစားရင် ကျနော် အရမ်းအိပ်ငိုက်ပါသည်။ ဒီနေ့ အတန်းမတက်သေးသောကြောင့် မန္တလေးဆောင်ဆင်ဝင်အောက်မှာ ကျောင်းသားများ စုရုံးစုရုံးနဲ့စကားပြောနေကြပါသည်။ ကျနော့် မျက်စိရှေ့မှာ မန္တလေးဆောင်သို့ ဆင်တစ်ကောင်တရွှေ့ရွှေ့နှင့်လာနေသလိုဘဲ… သေချာကြည့်လိုက်တော့ဖက်တီး လာနေသည်….. ခါတိုင်းဆို လွယ်အိတ်ကို ပုခုံးမှာလွယ်ပြီး ကျန်လက်တစ်ဖက်က လက်သုတ်ပ၀ါချည်ထားသော လေးထောင့်ထမင်းဘူးကို ယူလာလေ့ ရှိပါသည်။ အခုတော့ လွယ်အိတ်တစ်ဖက်ကိုလွယ်ပြီး ငါးဆင့်ဂျိုက်ကြီးကို ကြိမ်ခြင်းနှင့်ထည့်ပြီး ဆွဲလာနေသည်။ သူ့ကိုကြည့်ရတာ မသက်သာပါ…. အမြင်မတော်သဖြင့် ကျနော် ၀ိုင်းကူပြီး ဆွဲပေးလိုက်ပါသည်။
မဟုတ်ဘူးလေကွာ…ဗျော့ကြီးတို့ မွန်ကြီးတို့ သေးသေးတို့အတွက်ပါ ယူခဲ့တာ…..
ဖက်တီးက ချစ်စရာကောင်းသွားပြန်ပြီ….သူငယ်ချင်းတွေအပေါ် ဒီလိုစေတနာရှိတာ…..
123း0 အတန်းလွှတ်တော့ ကျနော့်အခန်းမှာ ထမင်းစုစားကြပါသည်။
အားလုံးစားသောက်ပြီးတော့ ဗျော့ကြီးနှင့်မွန်ကြီးက မတ်တတ်ထရပ်လိုက်ပါသည်။
ဖက်တီး…..ဗျော့ကြီးနှင့်မွန်ကြီးလက်ကိုဆွဲပြီး စားပွဲပေါ်မှာ အတင်းထိုင်ခိုင်းပါသည်။
အော်…ဖက်တီးမှာအကြံနှင့်ကိုး….အခုမှကျနော်သဘောပေါက်သည်။ ဖဲကစားချင်လွန်းလို့ ထမင်းတွေ အလေးခံသယ်လာပြီး ကျွေးသည်။ ပိုက်ဆံမရှိတော့ ပိုက်ဆံချေးသည်။ ဖက်တီး ဖဲကစားချင်စိတ် တော်တော်ပြင်းပြနေရှာပါသည်။
ကဲ..ကဲ….မင်းတို့အားလုံး ဖက်တီးကျွေးတာ စားပြီးပြီဆိုတော့ ဖက်တီးကို ပါရမီဖြည့်ပေးလိုက်ကြတော့..
ကိုးမီး အလယ်ပုံကစားကြပါသည်။ တစ်အိမ် တစ်ကျပ်နှင့် အပွင့်ကြီးသူက အားလုံးစားကြေး……
ဟော..ဒီမှာကလောင်နှစ်ကားနှင့် ကိုးဖဲ…. ကိုးပေါက် ဖက်တီး ကုလားနှစ်ချပ်နှင့် ကိုးတက်တော့ဖက်တီးပျော်နေပါသည်။
ဖက်တီး…ဒီတစ်လှည့်မကောင်းဘူး….3 ပေါက်ပဲရသည်။ ဖက်တီးက ကံကောင်းပြီးရင်းကောင်းနေပါသည်။
ဗျော့ကြီးအကျင့်ကို ဖက်တီးသိတယ်နော် …….ဖက်တီးကို နာမ်နှိမ်ဘို့လုပ်နေတာ…..
ဖက်တီးကံကောင်းလွန်းနေသည်။ သူ့ရှေ့မှာ ပိုက်ဆံတွေပုံနေပြီ…….ဗျော့ကြီးက နာမ်နှိမ်ရန် ဖိနပ်တစ်ဖက်ဝှက်ထားသည်။
ဟော..ကြည့်..မောင်ဂျစ် မင်းကောင်တွေကို ကြည့်ပြောအုံး….ဖက်တီးဖိနပ်တွေမရှိတော့ဘူး..
ဟိုမှာကြည့်စမ်း မွန်ကြီးအကျင့်မကောင်းဘူး…. ဖက်တီးဖိနပ်အပေါ်မှာ သူ့ဖိနပ်တင်ထားတယ်…..
ပြောပါအုန်း…ဖက်တီး အိမ်နိမ့်သွားအောင် အောက်လမ်းနည်းနှင့် လုပ်နေကြတယ်……
ရီလည်းရီရသည်။ ဖက်တီးအိမ် အရမ်းကောင်းနေသောကြောင့် ဖိနပ်ဝှက်သူက ၀ှက်၊ ဖက်တီးဖိနပ်အပေါ် သူတိုိ့ဖိနပ်တင်လိုတင်…..
ဖက်တီးအိမ် နိမ့်သွားအောင် ၀ိုင်းလုပ်နေကြသည်။ ဖက်တီးအိမ်ကပန်းပန်လျှက်ပါဘဲ…..ပိုက်ဆံပုံကြီးကြီးလာပါသည်။
သူတို့တွေ ဒီလောက်အောက်လမ်းနည်းနှင့်တိုက်နေကြတာ မင်းလည်း အထက်လမ်းနဲ့ပြန်ဆော်ကွာ..
သူ့ဒယ်ဒီ… အန္တရယ်ကင်းအောင် ဆောင်ထားစေသော ဘိုးဘိုးအောင်ပုံတော်ကို ထုတ်ပြီး သူ့ပိုက်ဆံပုံပေါ်ကို တင်လိုက်ပါသည်။
သားသားကို..အန္တာရာယ်ကင်း ဘေးရှင်းအောင် ကြည့်ရှုစောင်မပေးတော်မူပါ။
နောက်ပြီး ဘိုးဘိုးအောင်တန်ခိုးနဲ့ သားသားငွေတွေ နှစ်ဆတိုးပါရစေ……..
မင်းက အကုသိုလ်အလုပ် လုပ်နေလို့…..
တံခါးတစ်ယောက် လာပိတ်ဟေ့….ဆရာဦးမေတ္တာလာရင် ဟုတ်ပေ့ဖြစ်နေအုံးမယ်…..
ကျနော်တို့ စိတ်ဝင်စားစွာ ဖဲပွတ်နေကြပါသည်။ ထိုစဉ်တံခါးသည် ဖြေးဖြေးချင်းပွင့်လာပါသည်။
ကျနော်တို့အားလုံး…လုံးဝ မမျော်လင့်ထားသော ဒဂုံဆောင်အဆောင်မှူး ဆရာဦးမေတ္တာ….
ဖက်တီးပြောတော့ ဆရာအတန်းရှိတယ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့အားလုံး စိတ်အေးလက်အေး ကစားနေကြတာ…….
ဆရာကိုမြင်တော့ လက်ထဲမှဖဲချပ်ကိုလွှတ်ချလိုက်ရင်း ကဗျာကရာ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ပါသည်။
နောက်ခန်းက ခလေးတွေကို အတုမြင်အတတ်သင်အောင် လုပ်နေတာလား…..
မဟုတ်ဘူးဆရာ…ကျနော်တို့ လ္ဘ္ဘက်ရည်တိုက်ကြေးလောက်ဘဲ ကစားကြတာ…..
ဟို..ဖက်တီး…..Field မှာတုန်းက ဖဲမရိုက်တတ်ပါဘူး…ဘယ်တုန်းကတတ်သွားတာလဲ…
ဖက်တီးသည် လေကဲ့သောလျှင်မြန်သောအဟုန်ဖြင့် ဆရာဦးမေတ္တာရှေ့မှာ တရုတ်ရာဇ၀င်ရုပ်ရှင်ထဲမှာကဲ့သို့ ဒူးထောက်ပြီး လက်အုပ်ချီ လိုက်ပါသည်။ တစ်ကြိမ်တစ်ခါ အမိုက်မဲလေးကို ခွင့်လွှတ်တော်မူပါ……သားသားအရင်ကမရိုက်တတ်ပါဘူး….
ဒီဝက်ကိုယ်လုံးကို ဘောလုံးတစ်လုံးလိုမျိုး ပြေးပြီး ပိတ်ကန်ပစ်လိုက်ချင်ပါသည်။
သူ့ပြောသံကြားတော့ ကျနော်တို့အားလုံး ရီချင်နေပါသည်။
ပေးစမ်းဖဲထုတ်… နောက်အချိန်မှာ ငါအတန်းရှိတယ်…..
မင်းတို့အတန်းမတက်ရင်တော့ ဖဲရိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ မင်းတို့ကိုအရေးယူမယ်……
ထိုအခါဖက်တီးသည် ခုနကအတိုင်း ကျနော်ရှေ့မှာဒူးထောက်လက်အုပ်ချီပြီး……
တစ်ကြိမ်တစ်ခါ အမိုက်မဲလေးကို ခွင့်လွှတ်တော်မူပါ……
တရုတ်အမွှေးတိုင်နှင့် ရှိခိုးသလိုမျိုး လာလုပ်နေပါသည်…
သူလုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီး ကျနော် စိတ်မဆိုးရက်တော့ပါ……
ကျနော်တို့အားလုံး ဆရာဦးမေတ္တာအတန်း တက်ရန် မန္တလေးဆောင်သို့ ထွက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဆရာဦးမေတ္တာ စတိတ်ခုံပေါ်မှာ ကျောင်းသားများကို စိတ်ပါလက်ပါ သင်ကြားပို့ချနေပါသည်။ ကျနော်တို့5ယောက်က နောက်ဆုံးတန်းမှာထိုင်နေကြပါသည်။ ဖက်တီး ကျွေးလိုက်သော ခေါက်ဆွဲကြော်၊ ၀က်သားလိပ၊် ကော်ပြန့်လိပ်တန်ခိုးနှင့် အဆီရစ်ပြီး မျက်လုံးကိုဖြဲပြီး ဖွင့်နေရပါသည်။ ဆရာပို့ချနေသော စာဆီသို့ စိတ်မရောက်ပါ။ အိပ်ချင်စိတ် အရမ်းပြင်းပြနေပါသည်။ ဖက်တီးက နံရံနဲ့ကပ်လျှက် ဘေးတိုက်မှီပြီး မေးစေ့ကို လက်နှစ်ဘက်ဖြင့် ထောက်ထားပါသည်။ မသိရင် ဆရာပို့ချနေတဲ့စာကို စိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေတဲ့ပုံမျိုး…….
ဒါပေမယ့် သူ့ဆီက လေချွန်သံလို အသံသဲ့သဲ့ထွက်လာတော့... ကျနော်သိလိုက်ပါပြီ…..ဒီကောင်အိပ်ပျော်နေပြီ……..
စတိတ်ခုံပေါ်က ဆရာဦးမေတ္တာကတော့ ပုလင်းကွဲဖင်မျက်မှန်နောက်မှာရှိနေသော ဖက်တီးမျက်လုံး